IiPines eziXolileyo Apho indalo idibana nentuthuzelo eqhelekileyo
Indawo yoxolo yabucala kuye nabani na ojonge ukubuyela kwindalo. Sikufutshane kwiindlela zebhayisekile zokuhamba intaba, umlambo wokuloba, i-kayaking okanye ukuqubha. Ngexesha lokuqhambuka kwecorona sirenta ukuya kuthi ga kwiminimuin yeentsuku ezine ngenxa yokucoca kunye nokhuseleko lwethu sobabini nawe. Okuthathe iiyure ezimbini ukucoca ngoku kuthatha iintsuku ezimbini. Awunakuze ucokiseke. Nceda uqiniseke ukuba awunazimpawu okanye iimpawu xa ubhukisha. Nceda uvalele ekhaya.
Nokuba ukhetha ukwenza ntoni ukwamkela ubuhle apha phezulu, uyakushiya uziva ngathi ucofa iqhosha lokuhlaziya. Ezinye zezilwanyana onokuzibona yibhere, ibobcat, abalobi, ixhama, iporcupine, uKhozi nezinye izidalwa ezininzi ezikhulu nezincinane.
Sikwamkele umzingeli kunye nabalobi abafuna indawo ekufutshane namasimi eenyamakazi zikarhulumente kunye nePine Creek.
Ngelixa uthenga okanye ukhangela iivenkile zakho jikelele ungalibali ukujonga ukhetho lwabo lwemenyu kuqala kwaye ubavumele bakwenzele isangweji okanye i-sub. Baphinde babe ne-ayisikrimu yedessert emva koko! Ukuba ufuna isidlo esisesikweni ngakumbi sinendawo yokutyela emnandi/iibha zokhetho olukhulu.
Siyafumaneka ukuze sikuncede ngeemfuno zakho. Isikhululo se-hub sisembindini weerenti ezintathu esinazo. Sikwanazo neenkuni zokubasa umlilo kwinkampu yakho, isepha eyenziwe ekhaya, iihempe zokubila, iipakethi kunye neminqwazi ukuba ungathanda ukuthenga i-sake. UReagan kwaye ndifuna ukuhlala kwakho kube yiyo yonke into oyifunayo nangaphezulu! Inombolo yethu yefowuni ikwi-binder nakwifriji ukuba ufuna ukusibamba.
Siyafumaneka ukuze sikuncede ngeemfuno zakho. Isikhululo se-hub sisembindini weerenti ezintathu esinazo. Sikwanazo neenkuni zokubasa umlilo kwinkampu yakho, isepha eyenziwe ekhaya,…